> Resource > Android > Sida loo Play MOV Files (Quicktime) ee Android Phones
Guud ahaan, Android ma taageeri MOV (QuickTime) files. Sidaas si uu wax uga ciyaaro telefoonada Android, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo MOV in Android socon qaabab video, ama isticmaal media player Android oo awood loo maqli karo ee ah qaabab ka badan qalaad. In this article, waxaad ku baran doonaa sida loo ciyaaro MOV (QuickTime) files ee taleefannada Android oo isticmaalaya mid ka mid ah, kuwaas oo laba hab.
Habka 1: Beddelaan MOV (QuickTime) files si qaabab kale
Habka 2: Play MOV (QuickTime) files media player Android
Si aad si fudud u ciyaari file MOV on telefoonada android, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo xirfadle Android video converter- Wondershare Video Converter . Sidaa daraadeed, diinta files MOV si ay Android phone way fududahay, oo aad ku raaxaysan kartaa videos on phone Android on go ah. Haatan aan aragno sida loo isticmaalo.
1 dar files MOV in Converter ah
Ku rakib oo ay maamulaan software this. Riix ah "Add Files" button ama si toos ah jiidi-n-dhibic file MOV barnaamijka.
Nuqdada muhiimka ah inuu u ciyaaro MOV on telefoonada Android tahay inuu kala xusho saxda ah iyo qaab wax soo saarka ku haboon. Video Converter halkan waa in ay caawiyaan. Ka dib markii ay ku daray file MOV, riix "Qaabka" icon ee "Qaabka Output" tab, oo isu bedeli ah "Device" category. Halkan waxaad ka heli kartaa ku dhowaad dhammaan daydo phone Android ka mid ah liiska. Dooro mid ka mid ah sida ay baahidaada.
3 bilow hawlaha qaab beddelidda
Hit badhanka "Beddelaan". Markaas video Converter this isla markiiba bilaabi doonaan hawlaha qaab beddelidda iyo bar horumarka waqtiga inta hadhay ku tusi doono. Dhowr ilbiriqsi ka dib, aad samaysay!
Haddii aadan rabin in si loogu badalo files MOV, aad si toos ah u ciyaari karo files ee telefoonka aad Android isticmaalaya ciyaaryahan warbaahinta awood badan oo lacag la'aan ah Android sida Wondershare Player u Android . Tani media player Android taageertaa qaabab video kala duwan sida FLV, MKV, AVI, ROMB, MP4, MOV iyo in ka badan. Ka sokow, sidoo kale waxa aad isticmaali karto si aad u daawato videos ka ah goobaha madadaalada ugu caansan, sida YouTube, VEVO, Matecafe, vimeo, iwm .. Ka dib markii tip hoos iyo arko sida loo ciyaaro file MOV la.
Tallaabada 1 Download iyo rakibi this media player Android
Hadda riix badhannada download in ay sidoo kale soo bixi APK ama hoos uga Google Play kor ku xusan. Markaasaa waxaa u soo dajiyo ku saabsan telefoonka.
Tallaabada 2 Bedelka file MOV in ay phone
Connect aad Android Phone in computer. Fur jidka ku cad faylka MOV ah, iyo wareejiso telefoonka. Markaasay bilaabi Wondershare Player u Android inay u ciyaaro.